Na-atụ egwu ya
Na-emeri egwu gị, ọ ga-ekwe omume na ị gaghịzi ekwere na ya? Gịnị ma ọ bụrụ na m gwara gị na ọ nwere ike ịghọ ... a na-akwọ ụgbọala?
Egwu, mmetụta a nke nwere ike imeiii gi, mana, di iche iche ichebe gi ma kpalie gi ...
Cheedị; ịchọta onwe gị n'ọnọdụ dị egwu ma egwu a na-akpụ akpụ nwayọ nwayọ, ọ bụ oge ime ihe, nri? Jụọ onwe gị: ma eleghị anya, nke a bụ ihe mgbaàmà iji chekwaa onwe gị? Nke a nwekwara ike ịbụ ụzọ ị ga-esi nwee mmetụta, ịga n'ihu ma meghachi omume.
Ụjọ nke ọdịda, kamakwa nke na-ebu ụgbọelu, iji na-echefu ụgbọ ala ya, na-ahapụ ... ọtụtụ ọnọdụ dịgasị iche iche, ma na-enwekarị ụdị mmetụta a. Ị jiri ya tụnyere ihe na-ezighị ezi, n'ụzọ dị mma, ọ pụkwara inye anyị ntakịrị enyemaka ma gbanwee ndụ nke ndụ anyị n'oge ọrụ ma ọ bụ mkpebi ịme.
Echela na ndi oru aka oru nke oma adighi eche ya. Ha na-atachi obi na njem ha nke ụlọ ọrụ ha na ihe ize ndụ nke na-apụta. Nzube? Ha na-ebute ụzọ iji rụọ ọrụ ha.
Nzọụkwụ mbụ bụ ịmalite site na ịghọta ya iji kwado ya.
Mụta iji merie vidiyo 2 nkeji oge iji merie egwu gị. Ekwela ka ahụ gị kpọnwụrụ akpọnwụ ma mee ka ụjọ gị gbanwee ka ị ghara ime ka ị gbanwee.
Na vidiyo a, ị ga-ahụ ntụziaka na ndụmọdụ ga-enyere gị aka ime onwe gị ka ị nwee ike ịmepụta ihe ị nwere ike ..., na ihe niile, naanị 5 isi:
1) Uzo nke mmata : ị nwere ike ịtụ egwu na ị ga-enwe ihe ịga nke ọma dịka ị na-atụ egwu ọdịda ... Gee ntị na ụjọ ị na-eche ma nyochaa ọkwa ya.
2) Ama nkeemume : egwu dị ka ihe mgbaàmà nke ihe?
3) Nme : nkwadebe, ihe omume nke ga - enye gị obi ike ma mee ka egwu gị kwụsị.
4Onye ngosi Ị na-egwu ndụ gị? Ma ọ bụ ndị nke ụmụ gị? Were oge chee echiche banyere ya.
5) Anya anya Chee echiche na ọdịda gị dị mfe, ma were ya na ị ga-enwe ihe ịga nke ọma ọbụna karị!
Echegbula onwe gi ọzọ, gbanwee nchegbu gi ma wepu onwe gi.
Ịtụnanya na-atụ egwu-Egwu dị ka ihe mgbaàmà Mee 12th, 2018Tranquillus
gara agaTuto.com: N'uzi Na Nzuzi Na-eme Ka Ịmụta N'uzi Na Nzuzi.
-esonụGịnị Mere Anyị Ga - eji Na - eme Ihe Ike?